कसरी मेल अनुप्रयोग आईओएस9मा काम गर्दछ आईफोन समाचार
आईओएस in मा मेल अनुप्रयोग धेरै नयाँ सुविधाहरूको साथ आउँदैन, तर यसमा केही महत्त्वपूर्ण विवरणहरू छन् जस्तै सबै ईमेलहरू एकैचोटि मेटाउने क्षमता जस्ता। अन्य नवीनता अधिक उपयोगी छ, किनकि यसले हामीलाई तस्विर सम्पादन गर्न अनुमति दिँदछ जुन हामी पठाउँदै छौं वा प्राप्त गर्यौं ताकि हामीले हाम्रो सम्पर्कमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहेको कुरालाई संकेत गर्न। भोलि अर्को आईफोन प्रस्तुत गरिने छ र आईओएस for लाई सार्वजनिक रूपमा सुरू गर्न यो अझै एक हप्ता हुनेछ, तर समीक्षाले चोट पुर्‍याउँदैन। कसरी मेल अनुप्रयोग काम गर्दछ आईओएस or मा वा, यदि तपाईं आईओएसको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने, नेटिभ आईओएस मेल अनुप्रयोगको साथ हामीले गर्न सक्ने सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्।
1 मेलको साथ कसरी ईमेल पठाउने
2 कसरी फाइल संलग्न गर्ने
3 आईओएस D डायलिंग कसरी प्रयोग गर्ने (नयाँ)
4 फाईल iCloud ड्राइवमा बचत गर्नुहोस् (नयाँ)
5 एक मेलबक्स कसरी जोड्ने
6 मेल इशाराहरू
7 सबै सन्देशहरू मेट्नुहोस् (नयाँ)
मेलको साथ कसरी ईमेल पठाउने
ईमेल पठाउनुको कुनै रहस्य छैन र सहज छ। हामीले गर्न सक्ने पहिलो कुरा प्रतिमामा टच गर्नु हो नयाँ सन्देश (छवि हेर्नुहोस्) र फिल्डहरू भर्नुहोस्:
क्षेत्र मा "का लागि:" हामी ईमेलहरू प्रविष्ट गर्नेछौं जुन हामी ईमेल पठाउन चाहान्छौं। हामी सकेसम्म धेरै ईमेलहरू राख्न सक्छौं। जब हामी लेख्न थाल्छौं, कुनै अन्य ईमेल क्लाइन्टको रूपमा, यसले हामीलाई ठेगानाहरू प्रदान गर्दछ जुन हामीले प्रविष्ट गरेका अक्षरहरूसँग मेल खान्छ। यदि हामी चाहान्छौं भने हामी प्लस चिन्ह (+) मा छुन्छौं र सूचीबाट सम्पर्कहरू खोज्न सक्छौं।
क्षेत्र मा C Cc / Cco; को: " हामी इ-मेल देख्नेछौं जहाँबाट हामी ईमेल पठाउँदैछौं। यदि हामी त्यहाँ छुन्छौं, हामी एक ठेगाना थप्न सक्छौं जुनमा मेलको प्रतिलिपि पठाइनेछ।
En "चक्कर:" हामी इ-मेलको संक्षिप्त विवरण राख्नेछौं, उदाहरणका लागि, "रातको खानाको तस्बिर।" दायाँ पट्टि हामी एउटा घण्टी देख्दछौं जुन हामीलाई सूचित गर्नको लागि सेवा गर्दछ जुन ईमेलको उत्तर आएपछि। हामी यसलाई सूचना प्राप्त गर्न सक्रिय गर्नेछौं यदि हामीसँग "पुश" मेल स collect्कलन गर्ने विकल्प छैन भने पनि।
कसरी फाइल संलग्न गर्ने
एक फाईल संलग्न गर्न हामीसँग गर्नुपर्नेछ एक सेकेन्डको लागि थिच्नुहोस् सन्देशको बडीको स्पेसमा, जुन तपाईं अघिल्लो स्क्रीनशटहरूमा देख्नुहुने बार देखा पर्नेछ। यस बारबाट हामी गर्न सक्दछौं:
पाठ ढाँचा परिवर्तन गर्नुहोस्।
आईक्लाउड ड्राइवबाट एउटा संलग्नक थप्नुहोस्।
फोटो वा भिडियो घुसाउनुहोस्
आईओएस D डायलिंग कसरी प्रयोग गर्ने (नयाँ)
फोटोहरू जुन हामी संलग्न गर्दछौं वा ईमेलमा संलग्न छन्, हामीसँग उपलब्ध छन् डायल गर्दै। मार्कअप सानो छ इमेजेन सम्पादक यसले हामीलाई क्षेत्र हाइलाइट गर्न, विस्तार गर्न, हस्ताक्षर थप्न वा पाठ थप्न फोटोहरूलाई "मार्क" गर्न अनुमति दिन्छ। यो प्रयोग गर्न धेरै सरल छ। यसलाई सक्रिय गर्न, हामी केवल एक सेकेन्डको लागि छविमा आफ्नो औंला राख्नुपर्नेछ र हामी विकल्पहरू देख्नेछौं। यदि हामी ईमेल पठाउन जाँदैछौं भने कालो विकल्प पट्टी देखा पर्नेछ र हामीले "डायल गर्ने" खोजी गर्नुपर्नेछ। यदि हामीले ईमेलमा संलग्न भएको छवि प्राप्त गर्यौं भने हामीले "मार्क एण्ड उत्तर" छनौट गर्नुपर्नेछ।
यदि तपाईं ओएस एक्स योसेमाइट प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने, डायलिंग प्रयोग गर्नु तपाईंको लागि सजिलो हुनेछ। हामी संग छ:
उठेको हात: यसले हामीलाई अनुमति दिनेछ स्वतन्त्र तान्नुहोस्। उठेको हात एक छ स्मार्ट प्रणाली जसले हामी चित्रित गर्न चाहन्छौं भनेर व्याख्या गर्न सक्दछ। यदि हामी एर्रो जस्तो लाग्ने कुनै चीज कोर्दछौं भने, यसले हामीलाई छविमा राख्नका लागि तीर प्रदान गर्दछ। बाँकी आकारहरू जस्तै स्क्वायर, सर्कल वा हास्य बबलहरूसँग पनि यस्तै हुन्छ।
लुपा: हामीलाई अनुमति दिनेछ छविहरूको एक भाग विस्तार गर्नुहोस्। हामी म्याग्निफाइ। गिलास भित्र वा तल स्लाईड गरेर जुम इन वा आउट गर्न सक्दछौं।
पाठ: जस्तो तपाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, यसले कार्य गर्दछ पाठ थप गर्नुहोस्.
FIRMA: को लागी हाम्रो हस्ताक्षर जोड्नुहोस्। यदि हामी योसेमाइटमा पहिले नै बनाइसकेका छौं भने हामीसँग यो हाम्रो आईफोनमा उपलब्ध हुनेछ, जबसम्म हामी आईक्लाउड खातासँग जडित छौं। यदि होईन भने, हामी त्यस बेलामा हस्ताक्षर थप्न सक्छौं र भविष्यमा हामीसँग यो उपलब्ध हुनेछ।
फाईल iCloud ड्राइवमा बचत गर्नुहोस् (नयाँ)
तपाईं अघिल्लो छविमा देख्न सक्नुहुन्छ, "मार्कअप" पछाडि (जुन मार्कि official हुनेछ जब आधिकारिक संस्करण जारी हुन्छ), हामीसँग आईक्लाउड ड्राइभमा संलग्नक सुरक्षित गर्न विकल्प पनि उपलब्ध छ। यदि हामीले यो विकल्प चयन गर्नुभयो भने, आईक्लाउड ड्राइभ खुल्नेछ र हामी तपाईंलाई कुन फोल्डरमा संलग्न फाईल बचत गर्ने भनेर बताउन सक्दछौं।
एक मेलबक्स कसरी जोड्ने
एक मेलबक्स जोड्न एकदम सहज छ। यसको लागि हामीले केवल:
ट्याप गर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्.
त्यसो भए हामी छुन्छौं नयाँ मेलबक्स.
हामी कुन फोल्डरमा हामी हाम्रो नयाँ मेलबक्स राख्न चाहन्छौं भनेर संकेत गर्दछौं
हामी सूचित गर्दछौं यदि हामी यसलाई आईक्लाउड वा अन्य कुनै डोमेनमा चाहान्छौं। किनकि मसँग अर्को छैन, मैले यसलाई iCloud मा राखेको छु।
मेल इशाराहरू आईओएस new को लागि नयाँ छैन। के हो ती आईकन हुन् नयाँ जब हामी तिनीहरूलाई बनाउनेछौं। हामी आईओएस in मा देख्ने पाठबाट हामी आइकनमा जान्छौं, जस्तो कि तपाईं अघिल्लो छविमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग तीनवटा गेस्चरहरू उपलब्ध छन्:
हामी पढ्ने / नपढिएको मार्क गर्न दायाँ तिर स्लाइड गर्नेछौं। यदि हामीले छोटो इशारा बनायौं भने हामी आइकनमा टच गर्न सक्दछौं, तर लामो इशारा गर्नु उत्तम हुन्छ किनकि यसले बाउन्स प्रभावको साथ स्वचालित रूपमा गर्दछ।
हामी मेल मेटाउन लामो इशाराको साथ बाँयामा स्लाइड गर्नेछौं।
थप विकल्पहरू हेर्न हामी छोटो इशाराको साथ बाँया स्वीप गर्नेछौं। यी विकल्पहरू सेटिंग्स / ईमेल, सम्पर्क, क्यालेन्डर / मेल / स्वाइप विकल्पबाट कन्फिगर गर्न सकिन्छ।
सबै सन्देशहरू मेट्नुहोस् (नयाँ)
यो ती आईओएस of को नयाँ विकल्प हो जुन हामी बुझाउन सक्दैनौं कि तिनीहरूले कसरी समावेश गर्न यती धेरै समय लिएका छन्। सबै सन्देशहरू मेटाउन, हामी केवल सम्पादनमा ट्याप गर्नुपर्दछ र "सबै मेटाउनुहोस्"। हामी सबै सन्देशहरू अर्को फोल्डरमा सार्न पनि सक्दछौं वा ती सबै सूचकको साथ मार्क गर्न सक्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी मेल अनुप्रयोग आईओएस9मा काम गर्दछ
भलाइ !!! अन्त्यमा!!! हल्लेलुजा !! म यस विकल्पको लागि वर्षौंदेखि पर्खिरहेको छु, ईमेलहरू एकैचोटि मेटाउन सक्षम भएन। केहि सरल र त्यो गर्न सकिदैन, यो मलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो .. जे भए पनि मलाई यो याद छैन, नत्र। तिनीहरूले अन्तिम मिनेटमा यसलाई हटाउँछ :)
यो हुन सक्छ कि ईमेलको मुख्य भाग खोजी गर्न सकिँदैन, केवल विषय वा सम्पर्क खोजी गर्नुहोस्!
फिलिप्स धेरै उज्यालो ह्यु लाइटस्ट्राइप प्लस शुरू गर्दछ